Fonzarelli S1 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
S1 သည်သြစတြေးလျမှလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ Fonzarelli မှလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတီဗွီမှ Happy Days မှဇာတ်ကောင် Fonzie မှလှုံ့ဆော်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ credo သည် “ Bespoke styling. Amped up performance. And most importantly, zero emissions” ။
အဆိုပါ Scooter ကိုချွေတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပျမ်းမျှနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာခန့်သုံးစွဲသည်။
စကူတာတွင် ၈၅၀၀ ဝပ်ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုရှိပြီးအမြန်နှုန်း ၈၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။
Scooter တွင်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အကွာအဝေးရှိရွေ့ပြောင်းနိုင်သော Lithium ဘက်ထရီနှစ်ခုရှိသည်။ ၈၀% ကောက်ခံမှုအတွက် ၁ နာရီဖြစ်သည်။